Blossom Ozurumba, mpiondana Wikimedia, no hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang mandritra ny herinandron’ny 29 mey–4 Jona 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Mey 2019 16:31 GMT
Amin'ity taona 2019 ity ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera, mifandimby ny mpikatroky ny fiteny afrikana sy ny mpanandra-teniny amin'ny fitantanana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainan-dry zareo tamin'ny famelomana aina indray sy tamin'ny fampahafantarana ny fiteny afrikana. Ity ny lahatsoratra momba an'i Blossom Ozurumba. (@blossomozurumba) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Blossom Ozurumba no anarako ary maro ny olona miantso ahy ho Blossom raha vitsy ny olona miantso ahy hoe Asampete izay azo adika avy amin'ny fiteny Igbo hoe “ilay tsara tarehy”. Mientanentana aho amin'ny fiteny sy kolontsaina Igbo ary manolotena hiantoka fa olona maro no hahavakiteny amin'ny lafiny sasantsasany na amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitenenana, fanoratana na famakiana. mpikambana mpanorina ny Igbo Wikimedians User Group aho ary hamaky resaka momba ny Orina Mpanasoa Wikimedia na dia tsy voaasa ho amin'izany aza. Monina ao Abuja, Nizeria aho ary tiako ny fitoniana sy ny fahatsapana filaminana dia misesy ao an-tanàna.